बंगलादेशबाट नेपाली विद्यार्थीको बिन्ती:सरकार हवाईजहाज पठाइदेऊ,भाडा आफैँ तिर्छौं । – Namaste Dainik
May 2, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बंगलादेशबाट नेपाली विद्यार्थीको बिन्ती:सरकार हवाईजहाज पठाइदेऊ,भाडा आफैँ तिर्छौं ।
काठमाडौँ–बंगलादेशको ढाकास्थित समोरिता मेडिकल कलेज कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासले आगामी सेप्टेम्बरसम्मलाई बन्द गरिएको छ । त्यही कलेजका विद्यार्थी हुन् सर्लाहीका अजय साह ।
‘म बसेको एरियामा साढे तीन सयभन्दा बढीमा कोरोना देखिएको छ । म बसेकै होस्टलको गार्डमा पनि कोरोना देखियो । यहाँको लकडाउन पनि निकै खुकुलो छ,’अजयले खबरहबसँग भने,‘हामीलाई खाद्यान्न र तरकारी लिन बजार जानै पर्ने बाध्यता छ,संक्रमित हुन्छौँ कि भन्ने निकै डर छ ।’
‘परिवारसँग निरन्तर सम्पर्क हुन्छ । कुनै बेला बिजुली वा इन्टरनेट नभएर सम्पर्क भएन भने परिवार निकै आत्तिनुहुन्छ,’साहले मलिन स्वरमा भने, ‘यहाँ जुनसुकै बेला कोरोना संक्रमण हुने जोखिम छ । नेपालमा परिवार मेरै चिन्तामा छन् ।’
डाक्टर बन्ने सपना लिएर बंगलादेश पुगेका अजय र उनका नेपाली साथीहरू संक्रामक रोगको जोखिममा छन् ।‘न पढाइ छ,न काम, अर्काको देशमा संक्रमणको जोखिम लिएर कति दिन बस्ने ! सेप्टेम्बरसम्म कलेज खुल्दैन,यहाँ बसिरहन आर्थिक समस्या पनि हुन थालेको छ,’ अजयले भने । सरकारले समयमै उद्धार गरोस् भन्ने उनको आग्रह छ ।
‘भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ५ तारिक (मे) मा आफ्नो देश फर्काउने भनिसकेको छ । हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म कुरा सुनेको छैन,’ अजयले खबरहबसँग भने,‘यस्तो महामारीको समयमा हामी नेपालीहरू पीडामा छौँ, हाम्रो सरकार आफ्नै पार्टीको समस्यामा अल्झेर बसेको छ ।’
अजयको आग्रह छ–‘आफूहरूलाई कोरोना संक्रमण नहुँदै सरकारले उद्धार गरिदेओस् ।‘हामी संक्रमणको उच्च जोखिममा छौँ । सरकारले समयमा उद्धार गरेन भने हामी कोरोना संक्रमित हुनेछौँ,’उनले भने, ‘हामी होस्टलभित्रै पनि संक्रमित हुने खतरा छ । सरकारले हाम्रो कुरा सुनिदिओस् ।’
‘म पढाइ सकेर नेपाल फर्किने प्रक्रियामा थिएँ तर लकडाउनले गर्दा रोकिएँ,’अनुले खबरहबसँग भनिन्,‘मजस्तै इन्टर्न सकेर बसेका धेरै डाक्टर हुनुहुन्छ । हामी घर फर्किने समयमा यहाँ बस्नुपर्दा होस्टलले पैसा माग्न थालेको छ ।’
‘हामीलाई खाना पाउँन पनि गाह्रो भएको छ । एक दिन ल्याएको खाना तीन दिनसम्म खाने गरेका छौँ,’अनुले भनिन्,‘अहिले मसँगै इन्टर्न सकेर बसेका डाक्टरहरूलाई आर्थिक समस्या पर्न थालेको छ । हामीले न नेपालबाट पैसा मगाउन सक्छौँ न त हामीसँग छ,के खाने । होस्टललाई कसरी पैसा तिर्ने ! समस्या परेको छ ।’
‘कतिपय होस्टलमा नेपाली केटीहरू मात्र बस्नुपरेको छ । एउटा भवनमा एक–दुई जनामात्र नेपाली केटीहरू बस्नुपरेको छ,’अनुले भनिन्, ‘हामीलाई राम्रो सुरक्षा पनि छैन, होस्टलमै पनि कुनै घटना हुने हो कि भन्ने डर छ ।’
बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावास र सरकारी निकायहरूमा आफ्नो समस्या राखे पनि सुनुवाइ नभएको अनुको भनाइ छ ।‘दूतावास र श्रम मन्त्रालयलाई समस्या सुनाएको एक महिना भइसक्यो,’अनुले भनिन्, ‘उहाँहरूले उद्धारको प्रयास गर्दैछौँ भनेको पनि एक महिना भयो ।’
अनुको आग्रह छ–सरकारले हवाईजहाज पठाइदेओस्, भाडा हामी आफैँ तिर्छौं र सरकारले तोकेको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ । बिन्ती छ सरकार ! हामी अहिलेसम्म संक्रमित भएका छैनौँ । छिटो उद्धार गरिदिनुस् ।’
अनुले नेपाल फर्किन पाए क्वारेन्टाइन बसाइ सकेपछि आफुहरू कोरोना नियन्त्रणको काममा खट्न तयार रहेको बताइन् ।‘हामी मेडिकल क्षेत्रका हौँ । सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणको काममा सघाउन पनि तयार छौँ,’ अनुले भनिन् ।
‘कलेजले खाने बस्ने सुविध दिए पनि खानेकुरा लिन पालैपालो बजार जानुपर्छ । खाना पकाउने कुकहरू पनि बाहिरबाट आउनुहुन्छ । उहाँ घरमा कसरी बस्नुहुन्छ कोरोनाको जोखिममा हुनुहुन्छ कि, हामीलाई थाहा छैन,’इशानले खबरहबसँग भने ।
‘हामीले एक वर्षको एकमुष्ठ खर्च लिएर आएका हुन्छौँ,अहिले परीक्षा सकेर घर जाने समय हो,’इशानले भने,‘लकडाउनले गर्दा घरबाट पैसा पठाउन सक्नुभएको छैन । हामीलाई आर्थिक समस्या हुन थालेको छ । मानसिक तवानले डिप्रेसनमा पर्न लागेका छौँ ।’
‘एक महिना भइसक्यो,हामीलाई उद्धार गरिदिनुस् भनेर गुहारेको, अहिलेसम्म सरकारले सुनेन,’इशानले भावुक स्वरमा भने,‘सरकारले हामी बाकसमा फर्किएको हेर्न चाहेको हो ? हाम्रो विनम्र अनुरोध छ सरकार ! हामी जोखिममा छौँ,उद्धार गर ।’
चर्चित गायिका बिष्णु माझिको आमाको नि’धन,
बेलायतमा कोरोना का कारण फेरि एक नेपालीको मृत्यु । सबै भन्दा बढी नेपाली ले ज्यन गुमाएको देस बेलायत ।